Wasiir Bashiir Gurxan: “Qalbidhagax iyo ONLF yay Xoraynayaan … Dadku waa Xor Waana Ladanyihiin” (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiir Bashiir Gurxan: “Qalbidhagax iyo ONLF yay Xoraynayaan … Dadku waa Xor Waana Ladanyihiin” (dhegayso)
Seteembar 11, 2017 4:00 g 0
Wasiiru-dowlaha xiriirka gobollada u qaabilsan Madaxtooyada Puntland, Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan, oo waraysi gaar ah siiyay Daljir ayaa taageeray go’aankii ay ka qaateen Golaha Wasiirada Soomaaliya qadiyada Cabdikariin Qalbidhagax.
Wasiir Gurxan waxa uu isweydiiyey Qalbidhagax iyo ONLF cidda ay xorraynayaan, yayse ka xorraynaan? Ma dadka jaamacadaha dhigta, horumarka gaaray, wabiyada jeexday bay xoraynayaan? Mise Soomaalida Soomaaliya ee shanta calan kala taagtay ee mindida isku haysta? Wasiirka ayaa isweydiiyey cidda maanta xorraynta u baahan, ma Soomalida Soomaaliya, mise Soomaalida Itoobiya?
Wariye Cabdixakiin Xuseen Xassan ayaa Wasiirka waraystay.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 26132
Khasaaraha Qaraxa Xamar (dhegayso)